AZA MISAHIRANA MAKA AHY ATY … - rov@higa
AZA MISAHIRANA MAKA AHY ATY …
21 Septembre 2011, 22:05pm
Filoha RAVALOMANANA : "Aza misahirana maka ahy aty fa efa hoavy aho"
100 Miliara Ariary isam-bolana raha kely indrindra ny sandan'ny halatra ataon'ny FATE (+vidéo)
Fanodikodinana volam-bahoaka, fanambarana diso atao eny amin'ny Fadin-tseranana, fanadiovana vola maloto, fanondranana Andramena sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ireo no votoatin'ny fangoronan-karena nataon'ny FATE tao anatin'ny 30 volana nipetrahany teo amin'ny fitondrana. Ny ampamoaka nataon'ny Pr. Zafy Albert tao anatin'ny valan-dresaka an-kalamanjana no nahafanatarana ireo rehetra ireo. Nambaran'ity Filoham-pirenena teo aloha ity mantsy fa ilaina ny mifampizara vaovao sy ny mifanazava taorian'ny fitoriana an'i TGV izay napetrany teny amin'ny fampanoavana.
Nitondran'ny Pr. Zafy fanazavana ny mahakasika ireo vondron'olona manohana ny FATE ka tamin'izany no namoahany ireo mpandraharaha tera-tany sy vahiny izay miray tsikombakomba amin'ny FATE amin'ny fanodikodinana volam-bahoaka ka rehefa mahazo tolo-bidy izy ireo dia ifampizarana ny vola azo tokony hanaovana ny tetikasa. Ankoatra izay dia misy ihany koa ireo mpandraharaha karana izay mamatsy vola ny asa ratin'ny mpanongam-panjakana. Fa ny tena zava-doza dia misy ny tambazotra mampiditra am-ponja ireo rehetra manakantsakana izany asa ratsy izany ka ny minisitry ny fitsarana FATE no mitarika izany. Nokianin'ny Pr. Zafy marindrano moa ny fanamabaran'i Chrisitine Razanamahasoa handefa "commandos" hisambotra ny Filoha RAVALOMANANA any Afrika Atsimo na hampiditra am-ponja azy rehefa tafaverina an-tanindrazana izy. "Izy no tsy maintsy haiditra am-ponja rehefa miziriziry satria misy porofo avokoa ny zavatra nataony teto amin'ny Firenena" hoy ihany Zafy Albert.
Vola be tsy hita pesipesenina
Vokatr'ireo asa ratsy ataon'ny FATE ireo dia efa manana ny fomba fitehirizana vola izy ireo araky ny nambaran'ny Pr. Zafy ihany. Raha fehezina kosa anefa ireo dia aman'arivo tapitrisa ny sandan'ny vola nahoroan'ny mpanongam-panjakana sy ny ekipany ka nahatonga azy ireo mpanefoefo tampoka nandritran'ny fotoana nibodoany toerana. Izay, arakin'ny fanazavana ihany, no nahasahian'i TGV nilaza fa manam-bola be isika ka afaka miatrika izay fanamby rehetra tsy maintsy lalovana. Tarehimarika vitsivitsy no nentin'ny Pr. Zafy nanampy ny fanazavany : 1.835.000.000 Ariary, 100 Miliara Ariary isam-bolana, 80 MIliara Ariary, 1.650 Tapitrisa Ariary, 10 Miliara Ariary ary ny tena goavana dia ny momba ny andramena izay mitetina 548 MIliara sy 664 Tapitrisa Ariary. Ity tarehimarika farany ity dia nambaran'ny Pr. Zafy fa tsy mbola ny antsasan'ny fanondranana nataon'i TGV sy ny ekipany akory.